Inqubomgomo yobumfihlo 🥇 Emulator.online ▷ 🥇
Lokhu akuyona nje inqubomgomo yobumfihlo, isimemezelo sami semigomo.
Njengoba ngibhekele le webhusayithi, ngifuna ukukunikeza iziqinisekiso zomthetho ezinkulu kakhulu maqondana nobumfihlo bakho futhi ngikuchaze ngokucacile nangokucacile ngangokunokwenzeka, konke okuphathelene nokusebenza kolwazi lomuntu siqu ngaphakathi kwale webhusayithi.
Le Nqubomgomo Yobumfihlo izosebenza kuphela kwimininingwane yomuntu siqu etholakala kwiWebhusayithi, ingasebenzi leyo mininingwane eqoqwe ngabantu besithathu kwamanye amawebhusayithi, noma ngabe ixhumene neWebhusayithi.
Imibandela elandelayo ibopha umsebenzisi nomuntu ophethe le webhusayithi, ngakho-ke kubalulekile ukuthi uthathe imizuzu embalwa ukuyifunda futhi uma ungavumelani nalokhu, ungathumeli imininingwane yakho kule webhusayithi.
Le nqubomgomo ibuyekezwe ngomhla ka-30/04/202020
Ngenhloso yezinhlinzeko zoMthetho oshiwo ngaphambili ngokuvikelwa Kwemininingwane Yabantu, imininingwane yomuntu uqobo oyithumela kithi izofakwa kwiFayile ye- “USERS of the WEB and SUBSCRIBers”, ephethwe yi-Online servicios Telemáticos SL nge-NIF: B19677095 futhi nge ikheli ku-C / Blas de Otero nº16 1º Iz. -18230 - I-Albolote (Granada). Leli fayela selisebenzise zonke izindlela zokuphepha nezobuchwepheshe ezisungulwe eRoyal Decree 1720/2007, zokuthuthukisa i-LOPD.
Ukuthumela nokuqopha imininingwane ejwayelekile
Ukuthunyelwa kwedatha yomuntu siqu kule webhusayithi kuphoqelekile ukuxhumana, ukubeka amazwana, ukubhalisela i-blog emulador.online, ukwenza izinkontileka ngezinsizakalo eziboniswe kule webhusayithi futhi uthenge izincwadi ngendlela ye-digital.
Ngokufanayo, ukunganikezeli imininingwane yomuntu oceliwe noma ukungayemukeli le nqubomgomo yokuvikela idatha kusho ukungakwazi ukubhalisa kokuqukethwe kanye nokucubungula izicelo ezenziwe kule webhusayithi.
Akudingekile ukuthi unikeze noma yimiphi imininingwane yomuntu ukuphequlula le webhusayithi.
Iyiphi idatha le webhusayithi eyidingayo futhi ngayiphi injongo
Le nqubomgomo ibuyekezwe ngomhla ka-25/03/2018
emulator.online izoqoqa idatha yomuntu siqu yabasebenzisi, ngamafomu online, nge-Intanethi. Imininingwane yomuntu eqoqiwe, ngokuya ngecala ngalinye, ingaba, phakathi kwabanye: igama, isibongo, i-imeyili kanye nokuxhumeka kokufinyelela. Ngokufanayo, esimweni sezinsizakalo zesivumelwano, ukuthenga izincwadi nokukhangisa, ngizocela uMsebenzisi imininingwane ethile yasebhange noma yedatha yokukhokha.
Le webhusayithi izodinga kuphela idatha eyanele ngenhloso yokuqoqwa futhi izibophezele:
Nciphisa ukucubungula idatha yomuntu siqu.
Bheka idatha yomuntu siqu ngangokunokwenzeka.
Nikeza ukucacelwa kwemisebenzi nokucutshungulwa kwemininingwane yomuntu siqu eyenziwa kule webhusayithi.
Vumela bonke abasebenzisi ukuthi babheke ukusebenza kwemininingwane yabo okwenziwa kule webhusayithi.
Dala futhi uthuthukise izinto zokuphepha ukukunikeza izimo zokuphequlula eziphephile kunazo zonke.
Izinhloso zedatha eqoqwe kule ngosi yilezi ezilandelayo:
Ukuphendula izidingo zabasebenzisi be-es. Isibonelo, uma umsebenzisi eshiya imininingwane yakhe kunoma yimaphi amafomu wokuxhumana, singasebenzisa le datha ukuphendula isicelo sakho futhi siphendule noma yikuphi ukungabaza, izikhalazo, ukuphawula noma ukukhathazeka ongase ube nakho mayelana nolwazi olufakwe eSizeni. IWebhu, izinsizakalo ezinikezwa ngeWebhusayithi, ukucutshungulwa kwedatha yakho yomuntu siqu, imibuzo ephathelene nemibhalo esemthethweni efakwe kwiWebhusayithi, kanye neminye imibuzo ongahle ube nayo.
Ukuphatha uhlu lokubhaliselwe, thumela izincwadi zezindaba, ukukhuphula kanye nokunikezwa okukhethekile, kuleli cala, sizosebenzisa kuphela ikheli le-imeyili negama elinikezwe ngumsebenzisi lapho senza okubhaliselwe.
Ukulungisa futhi uphendule kumazwana enziwe abasebenzisi kubhulogi.
Ukuqinisekisa ukuhambisana nemibandela yokusetshenziswa nomthetho osebenzayo. Lokhu kungafaka ukwakhiwa kwamathuluzi nama-algorithms asiza le webhusayithi ukuthi iqinisekise ubumfihlo bemininingwane yomuntu eyiqoqayo.
Ukusekela kanye nokwenza ngcono izinsizakalo ezinikezwa yile webhusayithi.
Ukumaketha imikhiqizo nezinsizakalo ezinikezwe kule webhusayithi.
Kwezinye izimo, imininingwane emayelana nezivakashi eziza kulesi siza zabiwe ngokungaziwa noma zihlanganiswe nabantu besithathu njengabakhangisi, abaxhasi noma abaxhumene nabo ngenhloso yokuthuthukisa izinsizakalo zami nokwenza imali kwiwebhusayithi. Yonke le misebenzi yokucubungula izolawulwa ngokuya ngemigomo esemthethweni futhi wonke amalungelo akho mayelana nokuvikelwa kwedatha ayohlonishwa ngokuya ngemithetho yamanje.
Kuzo zombili izikhathi, umsebenzisi unamalungelo agcwele ngaphezulu kwemininingwane yomuntu siqu nokusetshenziswa kwayo futhi angayisebenzisa nganoma yisiphi isikhathi.
Akunakuphikwa ukuthi le webhusayithi izodlulisela imininingwane yomuntu uqobo yabasebenzisi bayo kubantu besithathu ngaphandle kokubazisa ngaphambili bese icela imvume yabo.
Izinsizakalo ezinikelwa ngabantu besithathu kule webhusayithi
Ukuhlinzeka ngezinsizakalo ezidingeka kakhulu ekuthuthukiseni umsebenzi wayo, i-Online servicios Telemáticos SL yabelana ngemininingwane nabahlinzeki abalandelayo ngaphansi kwezimo zabo zobumfihlo ezihambisanayo.
Ipulatifomu yeWebhu: WordPress.org
Izinsizakalo ze-Courier kanye nokuthumela izincwadi zezindaba: ImeyiliChimp I-675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, GA 30308.
Ukulondolozwa kwamafu nesipele: IDropbox -Drive, iWetransfer, i-Amazon Web Services (i-Amazon S3)
Izinhlelo zokuthwebula imininingwane yomuntu eqoqwa yile webhusayithi
Le webhusayithi isebenzisa izindlela ezahlukene zokubamba imininingwane yomuntu siqu. Le webhusayithi ihlala idinga imvume yangaphambilini yabasebenzisi ukucubungula imininingwane yabo ngezinjongo ezikhonjisiwe.
Umsebenzisi unelungelo lokubuyisa imvume yakhe yangaphambilini nganoma yisiphi isikhathi.
Amasistimu wokufaka idatha yomuntu siqu esetshenziswa yi-emulator.online :
Amafomu wokubhaliswa kokuqukethwe: Ngaphakathi kuwebhu kunezinhlobo eziningi zokwenza kusebenze okubhaliselwe. Bheka kubhokisi lakho lokungenayo le-imeyili. Umsebenzisi kufanele aqinisekise ukubhalisa kwakhe ukuze aqinisekise ikheli lakhe le-imeyili. Imininingwane enikeziwe izosetshenziselwa kuphela ukuthumela i-Newsletter futhi ikugcine wazi mayelana nezindaba nokunikezwa okuthile, okukhethekile kwababhalisile be-es. Iphephandaba liphethwe ngu ImeyiliChimp
Lapho usebenzisa izinsizakalo zesikhulumi se-imeyiliChimp sokwenza imikhankaso yokuthengisa ngama-imeyili, ukuphatha okubhaliselwe nokuthumela izincwadi, kufanele wazi ukuthi I-MailChimp Inamaseva ayo asingethwe e-US ngakho-ke idatha yakho yangasese bazodluliselwa emhlabeni wonkana ezweni elibhekwe lingaphephile ngemuva kokuchithwa kwe-Safe Harbour. Ngokwenza okubhalisile, uyamukela futhi uvume ukuthi idatha yakho igcinwe yipulatifomu ye-MailChimp, ese-United States, ukuze ikwazi ukuphatha ukuthunyelwa kwezincwadi ezihambisanayo. I-MailChimp iguqulelwe kwizigaba ezijwayelekile ze-EU ekuvikelweni kwedatha.
Ifomu Lempendulo: Iwebhusayithi ifaka ifomu lokuphawula. Umsebenzisi angathumela amazwana kokuthunyelwe okushicilelwe. Imininingwane yomuntu siqu efakwe efomini ukufaka lawa mazwana izosetshenziselwa kuphela ukukwazisa nokuwashicilela.
Ifomu Lokuxhumana: Kukhona nefomu lokuxhumana lemibuzo, iziphakamiso noma oxhumana naye ochwepheshe. Kulokhu ikheli le-imeyili lizosetshenziselwa ukuphendula kubo nokuthumela imininingwane edingwa umsebenzisi ngewebhu.
Amakhukhi: Lapho umsebenzisi ebhalisa noma ezulazula kule webhusayithi, ama-cookies [e-cookies] agcinwa, Umsebenzisi angaxhumana nganoma yisiphi isikhathi inqubomgomo yekhukhi ukwandisa ulwazi ngokusetshenziswa kwamakhukhi nokuthi ungawenza kanjani usebenze futhi.
Ukulanda Amasistimu: Kule webhusayithi ungalanda okuqukethwe okuhlukile okufakwe ngezikhathi ezithile ngombhalo, ividiyo nevidiyo yomsindo. Kulokhu, i-imeyili iyadingeka ukuvula ifomu lokubhalisa. Imininingwane yakho isetshenziselwa izinhloso ezikhonjelwe ababhalisile.
Ukuthengiswa kwezincwadi: Ngokusebenzisa ingosi ungathenga okushicilelwe kanye nokwenziwa okubhaliwe ku-Online servicios Telemáticos SL, kuleli cala, imininingwane yomthengi (Igama, isibongo, nenombolo yocingo, ikheli leposi kanye ne-imeyili) kuyadingeka ngeplanethi yePaypal njengefomu yokukhokha.
Abasebenzisi bangakwazi Zikhiphe ohlwini noma kunini yezinsizakalo ezihlinzekwa yi-emulador.ixhumanisa ne-Newsletter efanayo.
Umsebenzisi uzothola ngaphakathi kwaleli sayithi, amakhasi, ukukhushulwa, abaxhasi, izinhlelo zokubambisana finyelela izindlela zokudlulisa amehlo zomsebenzisi ukusungula amaphrofayli omsebenzisi futhi akhombise ukukhangiswa komsebenzisi ngokuya ngezintshisakalo zawo zokuphequlula. Lolu lwazi luhlala lungaziwa futhi umsebenzisi akakhonjwa.
Imininingwane enikezwe kulawa maSayithi axhaswe noma izixhumanisi ezixhumene nayo ingaphansi kwenqubomgomo yobumfihlo esetshenziswa kulawo maSayithi futhi ngeke ibe ngaphansi kwale nqubomgomo yobumfihlo. Ngakho-ke, sincoma kakhulu Abasebenzisi ukuthi babuyekeze ngokuningiliziwe izinqubomgomo zobumfihlo zezixhumanisi ezihambelana nabo.
Inqubomgomo Yemfihlo yokukhangisa enikezwe kwa-Adsense: Google AdSense.
Umgomo wobumfihlo wemithombo yokulandela umkhondo esetshenziswa kuleli sayithi:I-Google (Analytics)
Ku-emulator.online, okuthandwa ngabasebenzisi bayo, izici zabo zokuphila kwabantu, izindlela zabo zomgwaqo, nolunye ulwazi kufundwa ndawonye ukuze baqonde kangcono ukuthi izithameli zethu zingubani nokuthi zidingani. Ukulandelela okuthandwa ngabasebenzisi bethu futhi kusisiza ukuthi sikukhombise izikhangiso ezifanele kakhulu.
Umsebenzisi futhi, ngokujwayelekile, noma yimuphi umuntu wemvelo noma osemthethweni, angakha i-hyperlink noma ithuluzi lokuxhumanisa lobuchwepheshe (ngokwesibonelo, izixhumanisi noma izinkinobho) kusuka kwiwebhusayithi yabo ukuya emulator.online (i- "Hyperlink"). Ukusungulwa kwe-Hyperlink akusho ukuthi kunoma yikuphi ukwenzeka kobudlelwano phakathi kwe-emulator.online kanye nomnikazi wesayithi noma ikhasi le-web lapho iHyperlink isungulwa khona, noma ukwamukelwa noma ukuvunyelwa yi-emulator.online yokuqukethwe kwalo noma nezinsizakalo. Kunoma ikuphi, i-emulator.online igcina ilungelo lokunqabela noma likhubaze noma yisiphi isixhumanisi kuWebhusayithi nganoma yisiphi isikhathi.
Abasebenzisi bangakwazi Zikhiphe ohlwini noma kunini yezinsizakalo ezinikezwe yi-emulador.online i-Newsletter efanayo.
Ukunemba nemininingwane yeqiniso
Umsebenzisi uqinisekisa ukuthi idatha yomuntu siqu enikezwe ngamafomu ahlukile iyiqiniso, lapho bephoqeleka ukuxhumana nganoma yikuphi ukuguqulwa okuyikho. Ngokufanayo, Umsebenzisi uyaqinisekisa ukuthi yonke imininingwane enikeziwe ifana nesimo sabo sangempela, ukuthi isesikhathini futhi inembile. Ngaphezu kwalokho, uMsebenzisi uthembisa ukugcina idatha yakhe ivuselelwa ngaso sonke isikhathi, ebhekelela kuphela ukunemba noma ukuqamba imininingwane yedatha enikeziwe kanye nomonakalo ongabangelwa yilokhu ku-Online servicios Telemáticos SL njengomnikazi we-emulator.online yewebhu.
Ukusetshenziswa kwamalungelo okufinyelela, ukulungiswa kabusha, ukwesulwa noma ukuphikiswa
Kwesokudla ukubuza ukuthi iyiphi idatha yomuntu siqu esiyigcinayo mayelana noMsebenzisi nganoma isiphi isikhathi.
Kwesokudla ukusicela ukuthi sibuyekeze noma silungise imininingwane yamahhala engalungile noma ephelelwe isikhathi esiyigcina ngomsebenzisi.
Lungelo lokubhalisela kunoma yikuphi ukuxhumana kwezentengiso esingakuthumela kuMsebenzisi.
Ungaqondisa ukuxhumana kwakho futhi usebenzise amalungelo finyelela, ukulungiswa kabusha, ukukhanselwa nokuphikiswa Ngeposi leposi kuC / Blas de Otero nº16 1º Iz. -18230 - I-Albolote (Granada) noma nge-imeyili: info (at) emulador.online kanye nobufakazi obuvumelekile emthethweni, njengefotokopi ye-DNI noma efanayo, ekhombisa esihlokweni esithi "DATA PROTECTION".
Umsebenzisi uthi wazisiwe ngemibandela yokuvikelwa kwemininingwane yomuntu, ukwamukela nokuvuma ukwelashwa kwayo nge-Online Servicios Telemáticos SL ngendlela nangezinjongo eziboniswe kusaziso somthetho.
I-Online Servicios Telemáticos SL inelungelo lokuguqula le nqubomgomo ukuze iyivumelanise nomthetho omusha noma umthetho nezindlela zemboni. Ezimweni ezinjalo, uMhlinzeki uzomemezela kuleli khasi ushintsho olwethulwe ngokulindela okunengqondo kokuqaliswa kwazo.
Ngokuya nge-LSSICE, i-Online Servicios Telemáticos SL ayenzi imikhuba ye-SPAM, ngakho-ke ayithumeli ama-imeyili ezentengiso angakaze acelwe ngaphambilini noma agunyazwe nguMsebenzisi, kwezinye izikhathi, angathumela ukukhushulwa kwawo kanye nokunikezwa okuthile futhi izinkampani zangaphandle, ezimweni kuphela lapho unemvume yabamukeli.
Ngenxa yalokhu, kwifomu ngalinye elinikezwe kwiwebhusayithi, uMsebenzisi unethuba lokunikeza imvume yakhe yokuthola i-Newsletter yami, ngaphandle kokuthola imininingwane yokuthengisa ecelwe ngqo. Ungakhansele nokubhalisela kwakho ngokuzenzakalela kuzincwajana ezifanayo.